MACLUUMAADKA IYO SAWIRRADA TARANKA YAR EE SHEPHERD DOG AUSTRALIAN - EEYAHA
'Tani waa Lewis, oo sidoo kale loo yaqaan Lewey oo lagu muujiyay halkan 1 1/2 sano jir. Isagu waa kaftan, dabeecad wanaagsan Eey iyo wehel wanaagsan. Isagu waa nin caqli badan oo jacayl badan. Weligey ma arag qof nool, oo ah eey wax kabaranaya! Wuxuu culeyskiisu yahay 10 rodol oo hal il oo yar oo buluug ah ayaa ku jirta. Muddooyinkii dambe wuxuu gabadhayada ka caawin jiray 'xoolo' digaag qalinkooda dib ugu laabo. ''
Liistada eeyaha yaryar ee adhijirka ah ee reer Australia
Shepherd yar oo Mareykan ah
Mini Shepherd Mini
Shepherd yar oo Aussie ah
Adhijirka Waqooyiga Ameerika
The Miniature Australian Shepherd (North American Miniature Australian Shepherd) wuxuu leeyahay jaakad dherer dhexdhexaad ah. Wuxuu ku yimaadaa meeris buluug ama casaan ah, midab casaan ama madow leh, dhammaantood leh calaamado cad iyo / ama midab buluug ah. Timaha hareeraha dhagaha iyo indhaha waa inaysan cadaan noqon. Koodhku wuxuu noqon karaa mid toosan ama wax yar rogrogmi kara, waana inuu lahaadaa baalal xaga dambe ee lugaha, iyo manjo iyo qoorta qoorta. Timaha madaxa, foodda hore iyo dhinaca dambe ee dhegaha waa ka gaaban yihiin dharka intiisa kale. Gadaal dambe waa isla dhererka xarunta hore. Dhakada qalfoofkeedu waa mid fidsan oo nadiif ah. Cagaha waa oval iyo compact. Dibnaha ma sudho daanka hoose.
Adhijirka yar yar ee Australiyaanka ah waa eey fudud, oo weligood ah eey jecel yihiin inay ciyaaraan. Geesinimo, daacad iyo kalgacal, waa saaxiibo caruureed aad u fiican oo la fiican carruurta firfircoon. Saaxiib daacad ah iyo ilaaliye. Aad u firfircoon, kacsan oo feejignaan leh, waxay jecel yihiin inay ku qanciyaan dareen lixaad oo ku saabsan waxa milkiilaha doonayo. Shepherds Miniature Australia waa kuwo caqli badan oo si fudud loo tababaran karo. Waxay noqon karaan kuwo neerfayaasha ah oo wax burburin kara haddii keligaa laga tegey aad u badan oo aan ku filnayn jimicsi maskaxeed iyo mid jireed . Waxay ubaahan yihiin shaqo inay qabtaan, maaddaama ay noocyadu yihiin kuwo aad u caqli badan, firfircoon oo sidaas si fudud u caajisa. Si fiican u dhexgeli eygaaga markii eyku yahay si looga fogaado inuu ka shakiyo shisheeyaha. Qaarkood waxay jecel yihiin inay cagaha dadka cagaha isku dayaan inay ku daaqaan. Waxay u baahan yihiin in la baro dhaqashada aadanaha lama aqbali karo. Saaxiib wanaagsan, waxay kaloo ku raaxeeysataa keyd yar oo shaqeynaya. Waa shaqaale aamusan. Noocani badanaa ma aha eey dagaal badan. Hubso inaad tahay eeygan mid adag, kalsooni leh, oo iswaafaqsan hogaamiyaha xirmada si looga fogaado Cudurka Dog yar , bini-aadamku kiciyay dhibaatooyinka dhaqanka . Had iyo jeer xusuusnow, eeyadu waa harooyin, ee maaha dad . U hubso inaad la kulanto dareenkooda dabiiciga ah sida xayawaanka.
Dhererka Cayaaraha: 10 - 14 inji (26 - 36 cm)
Miisaanka Ciyaaraha: 7 - 20 rodol (3 - 9 kg)
Dhererka Yar: 13 - 18 inji (33 - 46 cm)
Miisaanka Yar: 15 - 35 rodol (6 - 16 kg)
Waxaa jira iskudhaf ah wieght maadaama alaabada Toy ee qaaliga ah ay miisaankeedu ka badnaan karo caato yar.
Hidda-wadaha midabka quruxda badan ee merle wuxuu kaloo xambaarsan yahay qodob indhoole / dhego la'aan ah. Tan waxaa lagu sheegi karaa oo keliya meeriska / meeriska iskutallaabtiisa. Inta badan meeriska North American Miniature Australian Miniature Miniature Australian Shepherds waa meerisyo heterozygous ah (hal waalid baa merle ah, kan kalena waa adag yahay) meerisyadoodana khatar uguma jiraan wax dhibaato caafimaad oo gaar ah sababo la xiriira midabkooda. Hubso inaad ka hubiso dhagaysiga meeryaha eyda. Dhibaatooyinka miskaha iyo indhaha ayaa dhici kara. Hubso in xayeysiiska iyo biyo xireenka eey yaryar la tijaabiyey oo la caddeeyey inay cad yihiin ka hor intaan la iibsan eey. Qaar ka mid ah eeyaha dhaqda waxay wataan hiddo-wadaha MDR1 kaasoo ka dhigaya kuwo u nugul daroogada qaarkood oo haddii kale okay la siin karo eey kale, laakiin haddii lagu baaro hidda-wadahan wuu dili karaa.
The Miniature Australian Shepherd waxay ku fiicnaan doontaa aqalka dhexdiisa haddii si ku filan loo jimicsado. Waxay dhex dhexaad ka yihiin gudaha waxayna ku fiicnaan doonaan daarad yar. Noocani wuxuu ku fiicnaan doonaa cimilada qabow.
Mini Aussie waxay u baahan tahay in la qaato maalin kasta, socod dheer . Eygan yar ee firfircoon ayaa u baahan jimicsi fara badan si uu qaab ahaan ugu sii jiro, ama uga sii fiicnaado, shaqo dhab ah oo la qabto.
Dharka 'Miniature Australian Shepherd' ayaa fududahay in la xannaaneeyo oo u baahan fiiro yar. Ku caday marmar burush adag oo maydh markii loo baahdo oo keliya. Noocani waa celcelis daadiya.
Barnaamijka taranka ee lagu horumarinayo Shepherd-ka yar ee Australiyaanka ah (North American Miniature Australian Shepherd) ayaa la bilaabay 1968 iyadoo la adeegsanayo wax yar Adhijirka Australia . Bixiyeyaasha ayaa hoos ugu soo cabiray cabbir ahaan si ay u soo saaraan eey yar maantana waxay sii wadaan inay ku dadaalaan inay soo saaraan muuqaalka muraayadda ee Adhijirka Ustaraaliya oo cabirkiisu si fiican ugu habboon yahay qaab nololeedka maanta, iyadoon loo hurin dareen, awood ama dabeecad.
Naadiga ugu weyn ee Mareykanka waa Naadiga Australiyaanka yar ee Mareykanka ee Mareykanka. MASCUSA, oo ah naadiga waalidka, wuxuu ka codsaday Naadiga Kennelka Mareykanka in lagu daro AKC. Nidaamka aqbalaadda AKC wuxuu ka bilaabmayaa diiwaangelinta Adeegga Hantidhawrka AKC Foundation. Naadiga Australia ee Adhijirka Naadiga ee Mareykanka ayaa aqbalay KELIYA GOOBAHA UGU HOOSE EE UGU SOO DHAWEEYA Australiya oo kaliya haddii Ghadaxa yar uu magaceeda beddelo oo uusan tixraac nooc kasta ah u lahayn Adhijirka Ustaraaliya ama taariikhdeeda. Qaar badan oo ka mid ah milkiilayaasha yaryar ee reer Australia ee Shepherd ayaa iska diiwaangelinaya AKC FSS. Magaca rasmiga ah ee AKC waa Miniature American Shepherd.
ASDR = Diiwaanka Eyga ee Mareykanka
MASCA = Naadiga Adhijirka ah ee Ustaraaliya ee Mareykan ah
MASCUSA = Naadiga Australiyaanka ee Yaryar ee Mareykanka
NSDR = Diiwaanka Eyga ee Qaranka
Phoebe oo ah Adhijirka Reer Toy ee reer Australiya oo jira 3 sano
Cooper, oo ah Yar yar oo Australian Shepherd ah oo yar yar oo jirta 11 toddobaad
Vera the Mini Australian Shepherd markay jiraan 6 bilood— 'Vera waxay leedahay shaqsiyad weyn. Aad ayey u jeceshahay oo waxay jeceshahay inay ciyaarto ciyaar. Iyadu waa eey weyn.
Lahaanshaha sawirka Miniature Australian Shepherd Club of America
Kani waa Roo oo ah Buluug indho buluug ah oo yar yar oo Australian Shepherd ah kana yimid Wee Mini Aussies ee Koonfurta California oo jira 8 bilood.
'Zoe waa Adhi Australian Adhijir ah. Waxay ku dhowdahay 9 bilood sawirkaan. Iyadu waa eey aad u firfircoon, aadna u caqli badan! Waxay sameyn doontaa oo kaliya khiyaanooyinka aan baray haddii ay jiraan cunto ku lug leh. Waxay jeceshahay inay la ciyaarto bisadeena Simba iyo Pug Bindi oo labo sano jir ah. Zoe wuxuu jecel yahay inuu ku ciyaaro kubbadaha yar-yar ee tennis-ka, waana jeclaan lahaa calaliso rooga ka dibna laf calalinta rawhide , taas oo ah mid ka mid ah dhaqankeeda xun, oo ay weheliso fuulitaanka miiskeyga yar yar ee yar yar ee gabadheyda xatooyada cuntada . Sawirka 'Zoe' waa 'lulaya,' mid ka mid ah xeeladeeda cusub. '
shih tzu isku qas bichon
'Kani waa Eygeyga Adhi ee reer Australiya ee Jaxi. Waxay tahay 4 1/2 bilood jir sawirkan, culeyskiisuna yahay 11 rodol. '
Dakota adhijirka yar ee Australiyaanka yar yar ee ciidda ku jira baaldi qalcad jaalle ah oo huruud ah
Dakota oo ah Adhijirka yar ee Australiyaanka ah
Teacup Australian Shepherd eey yaryar oo ah 3 bilood jir, waxaa iska leh sharkadda City Slickers Ranch
Eeg tusaalooyin dheeri ah oo ah 'Shepherd Miniature Australian'
Sawirro yar yar oo reer Australia ah
jack russell terrier chihuahua oo isku dhafan madow iyo cadaan
Siberian isku darka in Yeeyi Cunto malamute sahashan
kemmer stock eyda squirrel iskujira
shaybaarka weli madow Bernard isku darka